R/wasaaraha Yemen & wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya oo ku shiray Sanca – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
R/wasaaraha Yemen & wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya oo ku shiray Sanca
A warsame 26 November 2014 26 November 2014
Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga Cabdurraxmaan Ducaaley Beyle ayaa maanta kula kulmay Magaalada Sanaa ee Caasimadda dalka Yemen Ra’iisul wasaaraha dalkaasi Khaled Mahfud Bahah oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, arrimaha qaxootiga iyo iskaashiga walaalnimo ee u dhaxeeya labada shacab.
Wasiir Beyle waxa uu kala hadlay Ra’iisul wasaaraha Yemen, kordhinta deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda Soomaalida iyo xoojinta dadaalada lagu cirib-tirayo kooxaha argagaxisada iyo burcad badeeda ee dalalka Soomaaliya iyo Yemen dhibaatooyin ba’an u kala geystay.
Ra’iisul wasaaraha Yemen, Khaled Bahah ayaa muujiyay xushmadda uu u hayo mowqifka Soomaaliya ay ka taagan tahay u saldhigidda amniga, nabadgelyada iyo ilaalinta midnimada Yemen.
Khaled Bahah waxa uu taageeray geedi socodka nabadda iyo federaaleynta ee ka soconaya dalka Soomaaliya, isagoo rajeeyay in guul uu ku dhammaado hiigsiga cusub ee 2006 ee Soomaaliya u qorsheysan.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga waxa uu booqaday Rugta Ganacsiga Yemen iyo Xarun goboleedka isdhaafsiga macluumaadka badda, waxa uu sidoo kale kulan gaar ah la qaatay Wasiirka Kaluumeysig, Fahd Salem Kefayen.
Basaska u kala goosha Mandheera iyo Nairobi oo ilaalo la raacinayo
Buulo Barde: Guryo ay leeyihiin saraakiil Alshabaab oo dab la qabadsiiyey